'मौसममा बदली,मेघगर्जनसहित पानी,चट्याङ पर्दैछ ख्याल गर्नुहोस्'-मौसमविद् - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार March 30, 2018
काठमाडौं । शुक्रबार मेघगर्जनसहित उपत्यका लगायत मुलुकका अन्य केहि स्थानहरुमा पानी पर्ने छ । पश्चिमी वायु सक्रिय भएकाले शुक्रबार मेघगर्जनसहित पानी पर्ने मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले बताए । मौसमविद् प्रधानाङ्गका अनुसार, राति काठमाण्डौंसहित धेरै ठाउँमा पानी पारेको पश्चिमी वायु पूर्वतिर सरिरहेका हुनाले अहिले पूर्वका केही ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी परिरहेको छ ।
अरु ठाउँको मौसम सामान्यतया बदली भएको छ ।बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र भारतको बिहारमा बनेको न्यूनचापिय क्षेत्रको प्रभावले शुक्रबार केही ठाउँमा पानी पर्ने प्रधानाङ्गले बताए ।
जल तथा मौसम विभागका अनुसार शुक्रबार विशेषगरी पहाडी भू-भागमा पानी पर्ने छ । स्थानीय वायुको कारण मौसममा प्रभाव पार्ने भन्दै, मौसमविद् प्रधानाङ्गले -‘स्थानीय वायुको प्रभावका कारण दिउँसोपछि चट्याङ र हावाहुरी आउने सम्भावना रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।’
काठमाण्डौं राति १ दशमलव ४ मिलिमिटर पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । जुम्ला , काठमाडौं, लुम्ले र जिरी विराटनगर पोखरामा पानी परेको छ । २४ घण्टाको समयमा सबैभन्दा धेरै पानी जुम्लामा १७ दशमलव २ मिलिमिटर पानी परेको छ
असार ११,नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट करिब ८० किलोमिटर टाढा पर्ने एउटा गाँउलाई अमेरिकी […]
क्यान्डीे (श्रीलङ्का), १ जेठ - श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेनाले निकट भविष्यमा नेपालको भ्रमण […]
नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित ऐतिहासिक स्वागत समारोहमा विभिन्न भेषभूसा लगाएर सहभागी […]
काठमाडौं । आज गुरूपूर्णिमा, गुरुको सम्मान गर्ने दिन हो । आज सबै जना आफुले गुरु मानेका व्यक्तिहरुको सम्मान […]
अनशन तोड्न डा. केसीलाई उच्चस्तरीय बैठकको आग्रह
साउन २०, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गर्नुभएको उच्चस्तरीय बैठकले अनशनरत प्रा डा […]
भारतविरुद्ध नेपालले कस्तो खेल्ला?
काठमाडौं, अघिल्लो महिला बंगलादेशमा नेपाललाई बंगबन्धु गोल्डकप जिताउँदा नेपाली टोलीका प्रशिक्षक थिए बालगोपाल […]